Nin walaalkiis u diley Gabar uu Jeclaa oo uu La Hadlay
» Nin walaalkiis u diley Gabar uu Jeclaa oo uu La Hadlay
Nin u dhashay wadanka Al-jeeriya ayaa ciidamada Booliiska ay gacanta ku soo dhigeen ka dib markii uu dilay walaalkiis oo uu uga shakiyay in uu La sheekeysto Gabar ay Saaxiibo yihiin.
Wargeysyada kasoo baxa Magaalada Al-jeris ee Wadanka Al-jeeriya ayaa Maanta wexey bogga hore kusoo daabeceen Sawirka Ninkaan oo Gacmaha ka Katiinadeysan Kadib markii ay Ciidamada Policeka Gurigiisa Kasoo qabteen, Bacdama uu dilay Walaalkiis.
Ninkan gacan ku dhiiglaha ah ayaa wuxuu sheegay in habeenkii axada saqda dhexe uu banaanka Gurigooda ku arkay Walaalkiis oo La Haasaabaya Gabadha uu Jecelyahay ee ay dariska yihiin, Wuxuuna ka soo kacay Xiligaasi Hurdo isagoo doonayey in uu suuliga galo.
“Waxaan Hadal si hoose ah ka maqlay banaanka Gurigeena oo ay fadhiyeen Walaalkey C/xamiid iyo Adna oo aheyd Jaceylkeyga” Sidaasi waxaa yiri Sayid Samiir oo ah gacan ku dhiiglaha Walaalkiis u Dilay Gabar uu Jeclaa.
Adna oo aheyd Gabadha uu Jecelyahay Sayid Samiir ayaa sheegtay in C/xamiid aynaan la haasaabeynin balse ay banaanka isku arkeen sidaas darteedna ay Cabaar wada Fariisteen Jardiin ku hor yaalay guriga C/xamiid, Laakiin Sayid Samiir ayaa si kadis ah ku arkay Kadibna Walaalkiis ay isku hooyo iyo aabo yihiin Qaarajiyay.
Maxkamada sare ee Magaalada Al-jeris ayaa lagu wadaa in Todobaadkan ay Xukunto Ninkaan gacan ku dhiiglaha ah ee walaalkiis u dilay gabadhi uu Jeclaa ee uu la hadlay aawgeed.
Xamdi C/kariin Xirsi (Xamdi Xiis)